/Blog/Ithala/I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yaseBromantane
ezaposwa ngomhla 09 / 15 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Yonke into malunga neBromantane powder
1.Chemical properties zeBromantane
2.Bromantane Inkcazelo ngokubanzi
3. I-Bromantane powder Sebenzisa
4.Bromantane powder Indlela yokusebenza
5. I-Bromantane powder Isilinganisi
Bromantane powder Isikhuthazi esineempawu ezixhalabisayo eziphuhliswe eRashiya emva kweminyaka yama-80s ezisebenza ikakhulu ngokuthintela ukuphinda kuthathwe i-dopamine kunye ne-serotonin kwingqondo, nangona ikwanayo nefuthe le-cholinergic kwiidosi eziphezulu. Iziphumo zophando zicebisa ukuba indibaniselwano yempembelelo ye-psychostimulant kunye ne-anxiolytic iyasebenza ekunyangeni ukubonakaliswa kwe-asthenic. Iyonyusa ukusebenza kwesihlunu kwaye isetyenziswa njengesixhobo se-psychostimulant kunye nesikhuthazi somzimba.
Kwixesha elidlulileyo, lalisetyenziselwa ukutshatyalaliswa kwezinto, kwaye kwii-Olimpiki zase-Atlanta kwi-1996, abantu abaningana babonise impendulo efanelekileyo ekuhlolweni. Emva koko, bekuvinjelwe ukuba kusetyenziswe njenge-agent evuselelayo kunye ne-masking agent, kwaye ichazwa njengento ekhuthazayo kwiluhlu lwezinto ezingavumelekanga zomthetho wokuchasana nokudambisa. Uphando lwezilwanyana zale ngqungquthela lwenziwa ngokubanzi, kwaye amaninzi amaninzi ayaziwa, kodwa uphando malunga ne-bromanthan luphambili kakhulu. Iimvavanyo zabantu, ezifana nokuphucula ukunyamezela kwiimeko ezimbi kakhulu, ziye zaqhubeka.
Izifundo zibonise ukuba indibaniselwano yeziphumo ze-bromanthan's stimulant and anxiolytic drug iyasebenza ngakumbi ekunyangeni i-asthenia xa kuthelekiswa ne-placebo
1. Iipropati zeMichiza Bromantane
I-Bromantan yikhawu loLadasten, owaziwayo eRashiya njengowomantantyl bromide phenylamine.
Isicelo: ngomlomo (amacwecwe)
Ukufumaneka kwezinto: 42%
Ubomi be-half-biological: iiyure ze-11.21 (kubantu)
Iiyure ze-7 (kwiisenti)
Bromantan nje nootrop, 50-100mg esithathwa zovuselelo ukukhanya, isimo esihle, clearhead ukukhanya, kugxininiswa ngakumbi, ezinkulu (150-250mg +, kuxhomekeke amava esinalo stims) kukho mania ukukhanya, akukho ukuvuselela emzimbeni.
I-Bromantan yinto ekhuthazayo eyenza ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo. I 26th Olimpiki Games e 1996In Atlanta, eUnited States, ngenxa kumanyundululu kweziyobisi ngamazwe, i-IOC wenza amalungiselelo eneenkcukacha phambi kwiMidlalo yeOlimpiki, kuquka izifundo leengcali ukuvavanyelwa iziyobisi esuka eUnited States Germany kunye nokuthengwa kwezibonelelo uvavanyo obalaseleyo.
Ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa kuqhelekile; Ukongeza, ayifakwanga kuluhlu olwalelweyo lwe-IOC. U-Kolesov wanyanzelisa ukuba babhalele i-IOC Medical Committee kwiminyaka emibini eyadlulayo ukubuza ukuba ingaba iBromantan sisiyobisi esalelweyo, kodwa asikaphendulwa, ke oko kuthathwa njengokukhuselekileyo.
Amagosa eKomiti yezeOlimpiki yeKomiti yezoNyango asikhanyele eso siganeko kwaye athabatha iyeza njengomxube wee-steroids kunye nezinye izinto ezikhuthazayo kunye neearhente zokufihla ubuso, kwaye kukho isibonelelo esongezelelekileyo kuluhlu lwe-IOC lweziyobisi ezingavunyelwanga, ukuba nje iziyobisi ziphucula iimbaleki. ukusebenza kunokuthathwa njengeziyobisi ezingekho mthethweni. Omabini amacala anezimvo zawo.
3.I-Bromantane powder Sebenzisa
La machiza kufuneka uluhlu olubanzi iimpembelelo zebhayoloji, xa oluvuselela ethile kunye neempawu anxiolytic, isiphumo engundoqo amayeza kuba nomphumela emnandi kwinkqubo luvo, esizibonakalisa ekwandiseni yokusebenza ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni, sehlise uphuhliso lidiniwe nokukhawulezisa recovery emva uxinzelelo lomzimba kunye nengqondo.
Umthetho we-Pharmacological of tiredness can be done:
• ukuvuselela i-psychomotor (ukukhathala ngokukhululeka kwamanzi);
• Iimveliso ezivelisa amandla (umphumo ophezulu uphawulwe ngexesha lolawulo);
• abalawuli beemetabolism (izinto ezilawula ngokufanelekileyo okanye ezivimba iindlela zokuhamba).
Ama-actoprotectors adluliselwa kwiziyobisi ezinobungozi bokungabonakali uhlobo lwezenzo, ezinokuthi zibe nazo, kumgangatho ophezulu okanye ngaphantsi, umsebenzi onobuntsholongwane. Iziyobisi zihluke kwii-antihypoxants ngoxa zivakala kakhulu zivuselele iiprotheni kunye nokwandisa ukusebenza kwazo. Ukongezelela, baneempembelelo ezichasayo kwiimeko ze-hypoxis, eziphuhliswa ngenxa yokunciphisa amandla e-mitochondria ukuba ikhuphe izigxobo zesigxina ngokunyuka komzimba, kwaye kungekhona phantsi kweemeko zenzululwazi zenye i-etiology.
5.I-Bromantane powder Isilinganisi
Xa ulawulwa ngomlomo, iyeza likhawuleza, kodwa alifunxwanga ngokupheleleyo ukusuka kwithumbu lesisu ukuya egazini (ukungafumaneki ngama-42%), ngokukhawuleza nangokubaninzi kusasazwa kumalungu nakwizicubu, kodwa kususwa kancinci emzimbeni. Ifakwe kwizihlunu ze-adipose. Inqanaba lokufunxwa kwe-bromantane ukusuka kwithumbu lesisu kwabasetyhini liphezulu kakhulu, ngokwahlukeneyo, isiqingatha sobomi sifutshane kunesamadoda. Ixesha lokufikelela koxinzelelo oluphezulu lwe-bromantane egazini kubasetyhini abaphakathi kweeyure ezingama-2.75, nakumadoda - iiyure ezi-4. Iyeza lifakwa kwisibindi, kwaye ukupheliswa kwalo kwenzeka ikakhulu kwindlela ye-extrarenal.
Isiphumo se-amino-adamantane- bromantane, edibanisene nemiphumo yokuvuselela kunye nexhalaxytic, inyuse ukusebenza komzimba kunye nengqondo, iyancipha ukuphuhliswa kwenkqubo yokukhathala, ikhawuleza ukubuyisela kwiimeko eziqhelekileyo kunye ne-hypoxia eziyinkimbinkimbi kunye nezimo ze-hyperthermia, kuphucula iinkqubo ze-mnestic, uqeqesho; kuphucula ulungelelwaniso lweentshukumo, kuphakamisa iqondo lobushushu emzimbeni, umntu isenzo neuropsychoaktiviruyuschim (ngoko ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba mziba lengqondo), ubonisa kwingcinezelo ngokubhekiselele okulalisa of okudambisa, nemiphumo emihle inotropic ngaphandle kokuchaphazela umsebenzi chronotropic intliziyo kunye noxinzelelo lwegazi, lwenomsebenzi wokuzibulala.
Iziphumo ezintle ze-bromantane kwiiparameter zengqondo ye-psychophysiological yasekwa- ivolumu kunye nokuzinza kwengqwalaselo, ukusabela okuntsonkothileyo kwe-sensorimotor, iiparameter zempumelelo yomsebenzi womqhubi. Indlela yokusebenza yesenzo se-bromantane isekwe kumandla okwandisa umsebenzi wamaziko e-subcortical enkqubo ye-nervous system (i-nuclei ye-hypothalamus, i-nucleic ebonakalayo yetayara, i-hippocampus). Iyeza alinampembelelo kubalamli be-noradrenergic, kodwa liyaqonda iipropathi ezisebenzayo ngenkqubo yedopaminergic. Ubukho beempembelelo zokuthintela i-serotonin kukacetyiswa. Inxaxheba ethile ekuzalisekiseni isenzo se-pharmacological ye-bromantane idlalwe yipropati yayo yokukhusela kunye ne-membrane. Iziphumo zokukhusela i-bromantane ziyaphuculwa xa isetyenziswa kunye ne-bemitil.
Isichengiselwano asinasiphumo esicacisayo kwi-mediadergeric mediators, kodwa iyaqonda iipropati ezisebenzayo ngokusebenzisa inkqubo ye-dopaminergic. Ubungqina bentsebenzo engundoqo ye-serotonin iphakanyisiwe. Inxaxheba ethile ekuphunyezweni kwesenzo se-pharmacological ye-bromantane idlaliswa yipropati yayo yokukhusela. Impembelelo yokukhusela i-bromantane iyenyiswa xa isetyenziselwa kunye ne-bemitil. Isichengiselwano asinasiphumo esicacisayo kwi-mediadergeric mediators, kodwa iyaqonda iipropati ezisebenzayo ngokusebenzisa inkqubo ye-dopaminergic. Ubungqina bentsebenzo engundoqo ye-serotonin iphakanyisiwe. Inxaxheba ethile ekuphunyezweni kwesenzo se-pharmacological ye-bromantane idlaliswa yipropati yayo yokukhusela. Umphumo wokukhusela bromantane powder luphuculwa xa lisetyenziselwa kunye ne-bemitil
Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yeNoopept